अक्सिजनको अभाव कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानका लागि ठूलो चुनौतीः डब्लुएचओ – BRTNepal
अक्सिजनको अभाव कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानका लागि ठूलो चुनौतीः डब्लुएचओ
बिआरटीनेपाल २०७७ असार ११ गते १:२४ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गम्भीर बिरामी भएकाहरुको जीवन रक्षाका लागि मेडिकल अक्सिजन महत्वपूर्ण रहेको तर अक्सिजनको अभाव हुन सक्ने देखिएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । धेरै देशमा अहिले मेडिकल अक्सिजन पाउन मुश्किल हुन थालेको र यसले गर्दा कोरोना भाइरसविरुद्ध अभियान कमजोर बनाउने डब्लुएचओका महानिर्देशक डा. टेडरोज आध्यनोम गेब्रेयेसोसले बताउनुभयो ।
जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विश्वका धेरै देशमा अहिले अक्सिजन कन्सनट्रेटरको अभाव रहेको र सो मेसिनको माग आपूर्ति भन्दा धेरै भएको उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो समय हरेक हप्ता १० लाखका दरले संक्रमित थपिएको र संक्रमितको संख्या बढ्दा अक्सिजन कन्सनट्रेटर अभाव भएको उहाँको भनाई छ ।
डब्लुएचओले अहिलेसम्म १४ हजार अक्सिजन कन्सनट्रेटर किनेको र अब १२० देशमा पठाउने गेब्रेयेसोसले बताउनुभयो । डब्लुएचओका आपतकालीन टिमका प्रमुख डा. माइक रायनले अहिले दक्षिण अमेरिकी देशमा महामारी उच्च तहमा रहेको र सो क्षेत्रमा ज्यान गुमाउनेको संख्या एक लाख भन्दा बढी भएको बताउनुभयो ।
अबको हप्ता विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या एक करोड पुग्ने डब्लुएचओले बताएको छ । अहिलेसम्म विश्वमा ९१ लाख भन्दा बढी मानिसमा संक्रमित भएका छन् । यस्तै ४ लाख ७० हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।